ODF labsiin ADWUI'n faaydaa addaa Oromiyaan Finfinneerraa qabdu irratti baaste fudhatama hin qabu jedha - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured ODF labsiin ADWUI’n faaydaa addaa Oromiyaan Finfinneerraa qabdu irratti baaste fudhatama hin...
ODF labsiin ADWUI’n faaydaa addaa Oromiyaan Finfinneerraa qabdu irratti baaste fudhatama hin qabu jedha
Addi Dimokraatawaa Oromoo (ADO-ODF) labsii ADWUI’n dhimma faaydaa addaa Oromiyaan Finfinnee irraa qabdu ni eegsisa jechuun tibbana baaste fudhatama dhabsiise. Akka ibsa ADO’tti qabxiileen ADWUI’n labsii kana keessatti faaydaa addaati jechuudhaan tarreessite hudni faaydaa addaa Oromoof laatame osoo hin taane mirga lammiin kamuu argachuu qabuudha. Labsiin kuni, akka ibsa kanaatti, fakkeessuudhaaf yoo hin taane gaafii ummataa isa yeroo dheeraa hin deebisne, faaydaa Oromiyaan Finfinnee irraa qabdu hin tokko hin mirkaneessine, ammas dogoggora seenaas hin sirreessine. Wanti labsiin kuni uume yoo jiraate qilleensa wolshakkiifi yaaddoo ummata jiddutti gadi lakkisuudha. Ummanni labsii kana akka hin fudhanneefis ADO’n waamicha godheera. Guutu labsii ADO/ODF gara jalaatti dubbisaa.
labsii dantaa oromiyaa
Previous articleDantaa Oromiyaan Finfinnee irraa qabdu kan mirkaneessu qabsoo Oromoo malee labsii mootummaa ADWUI miti
Next articleBarattoonni Yunivarsiitii 16 balaa konkolaataan dhuman